Aad wax Top 8 Yosemite Qarsoon Talooyin in noqda Noqo Mac Geek d
> Resource > Mac > Baro Top 8 Yosemite Qarsoon Talooyin in Noqo Mac Geek
Baro qaar ka mid ah talooyin dheeraad ah oo nagu noqon dheeraad ah oo xirfad iyo geek, haddii aad rabto in aad nin oo ku saabsan Mac OS X Yosemite sida, halkan ku jira ee 8 Yosemite talooyin ku maqan marnaba waa in aad ka maqnaan.
1. QuickType meel
Sida aynu wada ognahay, QuickType waa feature muhiim ah in macruufka 8 iyo jeclaa by isticmaala iPhone, laakiin dhab ahaantii X cusub Mac OS ka Yosemite sidoo kale feature la mid ah tan, ESC jaraa'id oo kaliya marka aad qoraal ku app wax Apple, waxaa jiri lahaa a soo jeediyay sanduuqa gujisid hadalka soo socda.
2. RIGA fog Close on Your Mac
Hadda si fudud iyo aamusnaan aad xirto kartaa wixii isha aad iPad ama iPhone adigoo isticmaalaya feature wanaagsan, kaliya furo Safari ku saabsan Mac guji bogga cusub tab, markaas waxaad la xiro karo tab kasta adigoo gujinaya X soo socda, waxa uu.
3. Qor Your macruufka Screen
Imaging aad u baahan tahay si ay u abuuraan qaar ka mid ah Casharrada video for kulan, hadda aad si fudud ku gaari kartaa in iyada oo la isticmaalo macruufka feature duubo shaashadda in Yosemite. Just xiriiriyaan macruufka qalab (iPhone ama iPad) la Mac ah, ka dibna cabbayso barnaamij kasta oo la duubay iyo xulo qalab macruufka ah oo ku qoran yahay sida camera, ka dibna waxaad bilaabi kartaa shaqada.
4. Share Screen via iMessage
In kasta oo ay u badan oo qalab ka caawin kara share screen saaxiibadaa, laakiin tani feature cusub qaybsiga screen sahlan, gaar ahaan taageerayaasha iMessage ah. Waxaad riix kartaa button Details ka dooro button qaybsiga shaashadda si dhakhso leh la wadaagto aad saaxiib, waxaa taageero casriga ah ee sahli.
5. Ogeysiinta Aamusi in iMessage
Habkaani waa mid aad waxtar u leh haddii aad la shaqaynayso oo aadan rabin in la soo dhibtay, waxaad ka heli kartaa galay iMessage oo guji Details, markaas sax Ha ku dhibin si ay u dhaqaajiso.
6. Shift + Click to dhaqaaq iskticmaalka
Haddii aad isticmaalayso MacBook Air taas oo uu leeyahay screen yar, aad jeclaan lahayd dekedda si ay u arkaaan dhinaca midig ama bidix halkii hoose, ka dibna waxaad isku dayi kartaa in ay wax miiran Shift oo guji link kala on qabaan in ay si fudud u guuraan.
Waxaa si gaar ah loogu tala galay haddii aad ka shaqeeya habeenkii. Just helaan in Xulasho System General iyo sax checkbox ah "U isticmaal bar menu madow iyo xirto" ka dibna waxa uu ka shaqeysiin lahaa oo aad indhaha ku nasan karaa.
8. 3D iyo kabid Tool
Feature cusub ku daray in map Apple hubaal ka faa'iidaysan karto isticmaala kuwaas oo doonaya in ay safarka iyo aad u hesho aqoon u leh magaalada marka hore, kaliya ku qor magaca magaalada iyo guji kabid 3D Tool, ka dibna iska raaxayso.
Haddii aad ka heli maqan talooyin kale Yosemite oo aan kor ku soo sheegay, hana ka baqan in ay nala wadaagto ee comments soo socda. Inkasta oo haddii aad la kulantay wax dhibaato ah marka la isticmaalayo Yosemite ah, fadlan sax ku ah dhib Yosemite halkan.
Yosemite Data Recovery - kabsado lumay Xogta laga Yosemite
A Guide Full in hoos ka Yosemite in Mavericks
Sidee qasi lahaa qashinka madhan on Mac si loo badbaadiyo macluumaadka aad